कोरिया फेरि आउने कि, नेपाल मै केहि गर्ने ? :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
डोलु आले मगर, दक्षिण कोरिया
पहिलो दिन कम्पनीमा छिर्दै गर्दा
मेशिनको आवाज र व्हास्स्स नाक मुख बाट पसेर आन्द्राभुँडी बटार्ने पलास्टिक र केमिकलको गन्ध। काम गर्न सकिन्छ जस्तो लागेको थिएन।
एक पटक परदेशिएको जिन्दगी घरको न घाटको जस्तो साच्चै भन्ने हो भने एक पटक परदेशिएको जिन्दगी घरको न घाटको जस्तो न देशको न परदेशको। अब विदेश नआउने भन्यो भने गरि खान नसकेर आयो भन्ने जमात समाजमा ठूलै बनिसकेको हुन्छ। यता परदेशमा जति गरे पनि विदेशी विदेशिनै हुन्छ। नेपालमा के गर्ने भन्ने मेसो पाउन मुस्किल छ। परदेशको दुख र बाध्यता आफ्नै ठाउँमा छ तर समाज र आफ्ना आफन्तको अपेक्षा र चाहना बेजोड बढिसकेको हुन्छ। परदेश बसेर न आफ्नो चित्त बुझाउन सकिन्छ न अरुको नै। फेरी मान्छेको लोभ र लालच, चाहना र आकांक्षा भन्ने चिज जति भयो उति बढ्दै जाने पनि रहेछ। सिमित स्रोत र साधन बाट त्यसलाई पूर्ति गर्न कठिन छ।
उदय नेपाली wrote on 15 January, 2017
कथामा सत्य लुकेेकाेे छ तर अजै पनि नेपालमै केही गर्न नसके अबकाे ५ वर्ष पछि थप लाचार सिवाय केही हुने छैन । अाफ्ना सन्ततीलाइ पनि अाफ्नाे जस्ताे काम नदिने हाे भने मित्र अब अाँखा खाेल र केही जाेखिम लेउ र नेपालमै केही काम गर । नत्र याे भूमरी मात्र गहिरिनेछ ।
udaya rai wrote on 16 January, 2017
कोरिया लगाएत बिदेशमा सिकेको नेपालको हवाई मैदानमा उत्रने बित्तिकै बिर्सेर नेपाली पन शुरु गरिहाल्छन र पो समस्या त .. नेता ,जनता बुद्दिजिबि सबैले .
गीता राना wrote on 03 March, 2017
बिदेशमा जस्तो सुकै काम गर्न तयार हुन्छ तर नेपाल आएपछि खाको थाल पनि माझ्न गार्हो मान्ने प्रवृति ले बिग्रिएको छ I